Ny lovan'ny mpino dia fanavotana sy fiainana mandrakizay ao amin'i Kristy amin'ny maha-zanak'Andriamanitra amin'ny fifandraisana amin'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny raim-pianakaviana dia efa mamindra ny mpino ao amin'ny fanjakan'ny zanany; hitoetra any an-danitra ny lovany ary homena tanteraka amin'ny fiavian'i Kristy fanindroany. Ny olo-masina tafatsangana dia miara-manjaka amin'i Kristy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. (1 Jaona 3,1: 2-2,25; 8:16; Romana 21: 1,13-7,27; Kolosiana 1:1,3; Daniela 5:5,10; Petera-; Apokalypsy)
Ny valisoa avy amin'i Kristy
Nanontany an'i Jesosy indray mandeha i Petera: "Dia nanomboka Piera ka nanao taminy hoe: Indro, efa nahafoy ny zavatra rehetra izahay ka nanaraka Anao; inona no nomena antsika amin'izany? » (Matio 19,27). Azontsika atao ny mamerina manoratra an'io toy izao: «Nanary zavatra be izahay eto. Tena mendrika ve izany? ” Ny sasany amintsika dia mety mametraka an'io fanontaniana io ihany. Nahafoy zavatra be izahay tamin'ny dianay - fikarakarana, fianakaviana, asa, sata, fireharehana. Tena mendrika ve izy io? Misy valiny ve ho antsika?
Niresaka matetika momba ny valisoa ao amin'ny Fanjakan'Andriamanitra isika. Mpikambana maro no nahita io fanombantombanana io izay tena nampahery sy nanosika. Naneho ny fiainana mandrakizay amin'ny fomba azontsika takarina izany. Azontsika atao ny mampahafantatra ny tenantsika amin'ny valisoa ara-batana izay mahatonga ny traboina azontsika atao.
Ny vaovao tsara dia ny hoe ny asantsika sy ny lasibatra dia tsy very maina foana. Hahazo valisoa ny ezaka ataontsika - eny, na dia ny sorona nataontsika noho ny tsy fahazoana diso ny fotopampianarana. Nilaza i Jesosy fa isaky ny marina ny antony manosika antsika - raha ny asantsika sy ny sorona ataontsika noho ny anarany dia hovalian-tsoa isika.
Mino aho fa hanampy ny hiresaka momba ny karazana valisoa ampanantenain'Andriamanitra antsika. Betsaka ny zavatra tokony holazaina ao amin'ny Soratra Masina momba izany. Fantatr'Andriamanitra fa mametraka izany fanontaniana izany isika. Mila valiny isika. Nomeny aingam-panahy ny soratra masina hiresaka momba ny valisoa, ary matoky aho fa raha mampanantena valisoa Andriamanitra, dia hahita valisoa tena mahasoa izany - lavitra lavitra izay tsy sahy manontany (Efesiana 3,20).
Valisoa ho an'izao sy ho mandrakizay
Andao atomboka amin'ny fijerena ny fomba namalian'i Jesosy ny fanontanian'i Petera: «Fa hoy i Jesoa taminy: Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay efa nanaraka ahy dia hateraka indray rehefa mipetraka ny Zanak'olona. eo amin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny, mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana roa ambin'ny folo ary mitsara ny foko roa ambin'ny folon'ny Isiraely. Ary na zovy na zovy na trano na rahavaviny na rainy na reny na zanaka na zanaka na saha noho ny anarako dia handray azy zato ka handova fiainana mandrakizay » (Matio 19,28: 29).
Ny Evanjelin'i Marka dia manambara mazava fa miresaka momba ny fe-potoana roa samy hafa i Jesosy. "Hoy i Jesoa: Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: tsy misy olona miala ao an-trano na rahalahy na anabavy na reniny na ray na reny na zanaka na saha na saha ho ahy sy noho ny filazantsara izay tsy mahatratra zato heny: ankehitriny ny trano sy ny rahalahy Rahavavy sy renim-pianakaviana ary zanaka sy saha eo afovoan'ny fanenjehana - ary fiainana mandrakizay amin'ny tontolo ho avy » (Marka 10,29-30).
Nilaza tamim-pahamafisana i Jesosy fa hanome valisoa tondraka antsika Andriamanitra - saingy mampitandrina antsika koa Izy fa tsy fiainana ara-batana ny fiainana ity. Handalo ny fanenjehana, ny fizahan-toetra ary ny fijaliana isika amin'ity fiainana ity. Saingy ny tso-drano dia mihoatra noho ny zava-tsarotra amin'ny lafiny 100: 1. Na inona na inona sorona ataontsika, dia handray soa be dia be isika. Ny fiainana kristiana dia azo antoka fa "mendrika izany".
Mazava ho azy fa tsy nampanantena i Jesosy fa hanome saha 100 ho an'izay mandao ny toeram-pambolena hanaraka azy. Tsy mampanantena izy fa hampanan-karena ny olona rehetra. Tsy manome toky izy fa hanome reny 100. Tsy miresaka ara-bakiteny izy eto. Ny tiana holazaina dia ny hoe ny zavatra raisintsika aminy eto amin'ity fiainana ity dia mitentina zato heny noho ny zavatra atsipintsika - refesina amin'ny lanja marina, lanja mandrakizay, fa tsy amin'ny fahadalana ara-nofo.
Na ny fanadinana ataontsika aza dia manana lanja ara-panahy ho tombontsoantsika (Romana 5,3-4; Jakoba 1,2-4), ary mihoatra noho ny volamena izany (1 Petera 1,7). Nomen'Andriamanitra volamena sy valisoa hafa isika indraindray (mety ho fambara amin'ny zavatra tsara kokoa ho avy), fa ny valisoa izay tena manisa no tena maharitra indrindra.
Mazava ho azy fa miahiahy aho fa azon'ny mpianatra ny tenin'i Jesosy. Mbola nieritreritra ny fanjakana fanjakana ara-batana izay hitondra tsy fahalalahana sy fahefana eto an-tany tsy ho ela izy ireo (Asan’ny Apostoly 1,6). Ny maritiora Stephen sy James (Asan’ny Apostoly 7,57-60; 12,2) dia toa mitombina tsara
Surprise no tonga. Nankaiza ny valiny zato heny?
Fanoharana momba ny valisoa
Tao amin'ny fanoharana samihafa, i Jesosy dia nanondro fa ny mpianatra mahatoky dia hahazo valisoa lehibe. Indraindray ilay valisoa dia voalaza fa fitsipika, fa Jesosy kosa dia nampiasa fomba hafa hamaritana ny valisoantsika.
Ao amin'ny fanoharana momba ireo mpiasa ao amin'ny tanimboaloboka, ny fanomezana ny famonjena dia aseho karama isan'andro (Matio 20,9: 16). Ao amin'ny fanoharana momba ny virijina, ny lanonana fampakaram-bady no valisoa (Matio 25,10).
Ao amin'ny fanoharana ny talenta, ny valisoa dia aseho amin'ny fomba ankapobeny: ny iray dia "apetraka mihoatra noho ny maro" ary afaka "miditra amin'ny fifalian'ny Tompo" (And. 20-23).
Ao amin'ny fanoharana momba ny ondry sy osy, ny mpianatra voatahy nahazo alàlana handova fanjakana (V. 34). Ao amin'ny fanoharana ny mpitantana, ny mpitandrina mahatoky dia mahazo valisoa amin'ny alàlan'ny fanapahana ny tenany amin'ny fananan'ny tompony rehetra (Lioka 12,42-44).
Tao amin'ireo fanoharana ireo kilao, ny mpanompo mahatoky dia nomena fahefana tamin'ny tanàna (Lioka 19,16-19). Jesosy dia nampanantena ireo mpianatra 12 fa hanjaka amin'ny firenen'Israely (Matio 19,28; Lioka 22,30). Ny mambra ao Tyatira dia nomena fahefana amin'ny firenena (Apokalypsy 2,26: 27).
Nanoro hevitra ny mpianatra i Jesosy mba "hanangona harena any an-danitra!" (Matio 6,19: 21). Izy dia nanoro hevitra fa izay ataontsika eto amin'ity fiainana ity dia hahazo valisoa amin'ny ho avy - nefa karazana valisoa inona izany? Inona no mahatsara ny harena raha tsy misy vidiana? Raha vita volamena ny làlana, inona ny sandan'ny volamena?
Raha manana vatana ara-panahy isika dia tsy mila zavatra ara-batana intsony. Ny tiako holazaina dia io soso-kevitra io dia milaza fa rehefa mieritreritra ny valisoa mandrakizay isika, dia tokony hiresaka voalohany momba ny valisoa ara-panahy fa tsy ny zavatra ara-batana. Fa ny olana dia ny tsy anananay voambolana hamaritana ny antsipirihany momba ny fisianana izay tsy mbola niainantsika hatramin'izay. Noho izany dia mila mampiasa teny mifototra amin'ny ara-batana isika, na dia miezaka mamaritra ny endriky ny ara-panahy aza isika.
Ny valisoa azontsika mandrakizay dia ho toy ny harena iray. Amin'ny fomba sasany dia ho toy ny mandova fanjakana iray. Amin'ny fomba sasany dia toy ny hoe apetraka amin'ny fananan'ny Tompo. Ho tahaka ny fananana tanimboaloboka tantanin'ny tompony izany. Ho toy ny andraikitra amin'ny tanàna. Ho tahaka ny lanonana fampakaram-bady izany rehefa mizara ny hafalian'ny Tompo isika. Ny valisoa dia toy ireo zavatra ireo - ary mbola betsaka kokoa.
Ny tsodranontsika ara-panahy dia ho tsara lavitra noho ny zavatra ara-batana fantatsika amin'ity fiainana ity. Ny mandrakizay ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra dia ho be voninahitra sy mifaly kokoa noho ny valisoa ara-batana. Ny zavatra ara-batana rehetra, na inona na inona tsara tarehy na sarobidy, dia aloky ny valisoa any an-danitra tsy manam-petra tsara kokoa.
Fifaliana mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra
Toy izao no nataon'i David: "ampahafantarinao ahy ny lalan'ny fiainana: alao ny fifaliana dia feno sy feno fifaliana ny havanao mandrakizay" (Salamo 16,11). Jaona dia namariparitra izany fa fotoana tsy hisian'ny "fahafatesana, tsy misy fijaliana, tsy hisy hiaka intsony, tsy misy fanaintainana intsony" (Apokalypsy 20,4). Ho sambatra ny rehetra. Tsy hisy fisalasalana na inona na inona. Tsy misy olona afaka hieritreritra fa mety ho tsara kokoa noho ny fomba kely kokoa ny zavatra. Ho vitantsika ny antony namoronan'Andriamanitra antsika.
Nilaza ny sasany amin'ireto fifaliana ireto i Isaia rehefa nilaza fa hisy firenena hiverina any amin'ny taniny: “Ho voaverina indray ny navotan'i Jehovah, ary ho faly any Ziona; ho eo an-dohany ny fifaliana mandrakizay; Ho faly sy finaritra izy ireo, ary ny alahelo sy ny fisentoana dia handositra » (Isaia 35,10). Ho eo anatrehan'Andriamanitra isika ary ho sambatra kokoa noho ny taloha. Io no tian'ny Kristianisma amin'ny fomba nentim-paharazana hampitana ny foto-kevitra hoe "mankany an-danitra".
Ratsy ve ny mitady valisoa?
Ny mpitsikera sasany ny kristianisma dia naneso ny foto-kevitry ny lanitra ho fanantenana tsy azo ianteherana - fa ny fanesoana dia tsy endrika tsara fanjohianana. Fa ny tena fanontaniana mipetraka dia: mahazo valiny ve sa tsia? Raha misy valisoa tokoa any an-danitra dia tsy atao fihomehezana raha manantena ny hankafy azy isika. Raha mahazo valisoa tokoa isika, dia mampihomehy ny tsy maniry azy ireo.
Ny zavatra tsotra dia ny hoe nampanantena Andriamanitra fa hamaly soa antsika. "Fa raha tsy amin'ny finoana, dia tsy azo atao ny mampifaly an'Andriamanitra; fa na iza na iza te hanatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Izy ary manome ny valisoany amin'izay mitady azy » (Hebreo 11,6). Ny finoana ny valisoa dia ampahany amin'ny finoana kristiana. Na izany aza, misy ny mihevitra fa manala baraka na ambany noho ny mendri-kaja ny Kristianina te hanana valisoa amin'ny asany. Mihevitra izy ireo fa ny Kristiana dia tokony hitiavana antony tsy hanantena valisoa amin'ny asany. Tsy izany ilay hafatra feno ny Baiboly. Ankoatry ny fanomezana maimaimpoana famonjena amin'ny alàlan'ny fahasoavana amin'ny finoana, ny Baiboly dia mampanantena valisoa ho an'ny olony, ary tsy diso ny fitsiriritana ny fampanantenan'Andriamanitra.
Azo antoka fa tokony hanompo an'Andriamanitra isika noho ny antony manosika ny fitiavana fa tsy ho mpikarama izay miasa karama ihany. Na izany aza, ny Soratra Masina dia miresaka valisoa sy manome toky antsika fa hovalian-tsoa isika. Voninahitra lehibe ho antsika ny mino ny fampanantenan'Andriamanitra ary mahazo fampaherezana azy ireo. Ny valisoa dia tsy ny tanjon'ny zanaka navotan'Andriamanitra ihany, fa tafiditra ao anatin'ny fonosana nomen'Andriamanitra antsika.
Rehefa sarotra ny fiainana dia manampy antsika hitadidy fa misy fiainana hafa hahazoantsika valisoa. «Raha manantena an'i Kristy irery isika amin'ity fiainana ity dia isika no be mpalahelo indrindra amin'ny olona rehetra» (1 Korintiana 15,19). Fantatr'i Paoly fa ny fiainana ho avy dia hanao izay mahasoa ny olony. Nahafoy fahafinaretana vetivety izy mba hikatsaka fahafinaretana maharitra sy maharitra lava (Filipiana 3,8).
Tsy natahotra ny fiteny hoe "tombony" i Paoly (Filipiana 1,21:1; 3,13 Timoty 6,6:11,35;; Hebreo). Fantany fa ny fiainany amin'ny ho avy dia ho tsara lavitra noho ny fanenjehana an'ity fiainana ity. Nieritreritra koa ireo fitahian'ny sorona nataony i Jesosy ary vonona ny hiaritra ny hazo fijaliana izy satria nahita fifaliana lehibe any aoriana (Hebreo 12,2).
Rehefa nanoro hevitra antsika Jesosy mba hanangona harena any an-danitra (Matio 6,19: 20), tsy manambola izy - manohitra ny fampiasam-bola ratsy izy. Aza miditra vola amin'ny valisoa vetivety, fa mampiasà valisoa any an-danitra izay haharitra mandrakizay. «Hahazo valisoa be ianao any an-danitra» (Matio 5,12). «Ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny harena nafenina tany an-tsaha» (Matio 13,44).
Nanomana zavatra tsara ho antsika Andriamanitra, ary hitantsika fa tena mahafaly azy izany. Mety amintsika ny mibanjina izany fitahiana izany, ary rehefa mijery ny vidin'ny fanarahana an'i Jesosy isika dia tsara ihany koa ny manisa ireo fitahiana sy fampanantenana izay nampanantenaina antsika.
"Izay mahasoa ny olona rehetra, dia azony avy amin'ny Tompo" (Efesiana 6,8). «Ny zavatra rehetra ataonao dia atao amin'ny fonao rehetra fa Tompo fa tsy olona, ​​satria fantatrao fa hahazo ny lova avy amin'i Jehovah ianao. Manompo an'i Kristy Tompo ianao! » (Kolosiana 3,23: 24). «Tandremo sao very ny vitanay, fa mahazo karama feno» (2 Jaona 8).
Ny zavatra nomanin'Andriamanitra ho antsika dia tena mihoatra noho ny saintsika. Na dia eto amin'ity fiainana ity aza, ny fitiavan'Andriamanitra dia mihoatra lavitra ny azontsika takarina (Efesiana 3,19). Ny fiadanan'andriamanitra dia avo noho ny saintsika (Filipiana 4,7), ary ny hafaliany dia mihoatra noho ny azontsika atao amin'ny fitenenana (1 Petera 1,8). Koa mainka ve fa tsy ho afaka hilazana hoe hanao ahoana ny hatsaram-piainana hiaina miaraka Amina mandrakizay?
Ireo mpanoratra ny Baiboly dia tsy nanome tsipiriany maro ho antsika. Saingy mahalala zavatra tokana iray isika - izany no ho traikefa nahafinaritra indrindra hananantsika. Tsara noho ny sary hoso-doko tsara tarehy indrindra, tsara noho ny sakafo tena matsiro, tsara kokoa noho ny fanatanjahantena mahafinaritra, tsara kokoa noho ny fahatsapana sy ny traikefa tsara indrindra. Tsara lavitra noho ny zavatra rehetra eto an-tany. Ho valisoa be izany! Malala-tanana tokoa Andriamanitra! Nahazo fampanantenana lehibe sy sarobidy isika - ary ny tombontsoa hizara ity vaovao mahafinaritra ity amin'ny hafa. Fifaliana toy inona no tokony hameno ny fontsika!
Mampiasa ny tenin'ny 1 Petera 1,3: 9–XNUMX: "Isaorana anie Andriamanitra, Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay taorian'ny famindrampony lehibe dia natolony antsika ho amin'ny fanantenana velona amin'ny nananganana an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty lova tsy manam-petra sy tsy azo zakaina ary maina tsy voatahiry any an-danitra ho anao, fa voavonjy amin'ny herin'Andriamanitra ianao amin'ny finoana ho famonjena, izay vonona haseho amin'ny fotoana farany. Dia ho faly ianao izao fa vetivety foana, raha malahelo ianao, amin'ny fangatahana isan-karazany mba hahitana ny finoanao ho hita sy tena sarobidy kokoa noho ny volamena ephemeral izay voadio amin'ny afo, ho fiderana, fiderana ary Hajao rehefa aseho i Jesoa Kristy. Tsy mbola nahita azy ianao ary mbola tia azy; ary ankehitriny mino azy ianao na dia tsy mahita azy aza ianao; fa ho faly kosa ianao amin'ny fifaliana tsy takatry ny saina sy be voninahitra rehefa tratrarinao ny tanjon'ny finoanao, dia ny famonjena ny fanahy. »
Manana antony maro hisaorana antsika isika, maro ny antony tokony hifaliana sy hankalazantsika betsaka!